Carmen Posadas: ndiani iye uye ndeapi mabhuku atinokurudzira kuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Posadas chigadziri chemufananidzo
Pane zviitiko umo vamwe vanyori veSpanish vanokunda uye vanowana kuzivikanwa munyika yavanogara. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Carmen Posadas, munyori weUruguay akaiswa muSpain, kwaanogara uye mumwe wevanonyanya kuzivikanwa munyika yekunyora.
Asi, Carmen Posadas ndiani? Ndeapi mabhuku awakanyora? Tevere, tinoda kukuudza nezvemunyori uyu uye nekukurukura newe mamwe emabhuku ake. Iwe zvechokwadi unopedzisira wava kuvada.
1 Carmen Posadas ndiani
2 Carmen Posadas mabhuku
2.1 Ishe North Mhepo
2.2 Mutengesi wezviroto nedzimwe nyaya
2.3 Little infamies
2.4 Nhasi caviar, mangwana sardines
2.5 Nhoroondo yemupilgrim
2.6 Urwere hwaRebecca
Carmen Posadas ndiani
Carmen de Posadas Mañé, kuzivikanwa kwake chaiko, Akazvarwa muMontevideo, muUruguay. Akazviita muna Nyamavhuvhu 1953 asi anogara kuSpain, kwaanogara. Baba vake vaive mumiriri apo amai vake vaive vadzoreredzi. Nekuda kwebasa rababa vake, mhuri yese yakatama kubva kuUruguay ichienda kuArgentina, Spain, England, Russia… kubva pamakore gumi nemaviri. Ndiye dangwe pane vana vana vanin'ina, vasikana vatatu nemukomana.
Basa rake rekunyora rakatanga muna 1980, paakanyora mabhuku evana nevechidiki., marudzi maviri ayo parizvino asingazive zvakanyanya naCarmen Posadas, sezvo zvinyorwa zvake zvichienda kumwe kunhu. Zvisinei, akazozivikanwa nemabhuku aya. Naizvozvo, muna 1984 bhuku rake El Señor Viento Norte rakahwina mubairo weNational Prize for Literature.
Pamusoro pekunyora mabhuku evana, akanyorawo zvinyorwa zvemufirimu neterevhizheni, zvinyorwa zvekunyepedzera, uye akatobatsirana nevamwe vanyori mumhando dzakasiyana.
Sezvo makore aifambira mberi, saizvozvo nhamba yemabhuku aCarmen Posadas. Uye ndezvekuti muna 1991 akaburitsa chinyorwa chitsva, Ndiani akakuona uye ndiani anokuona! Muna 1995, bhuku rechishanu rebhuruu rinobhururuka; mu1997, Hapana zvazvinoratidzika, muunganidzwa wenyaya pfupi; kana muna 1998 Pequeñas Infamias iyo yaakakunda iyo Planeta Prize.
1999 raive gore rinotyisa kumunyori sezvo, mumwedzi miviri chete parutivi, akarasikirwa vese baba vake nemurume wake (Mariano Rubio).
Zvishoma nezvishoma akapora uye chinyoreso chake chakachinjira kuchinyorwa chevakuru. Uye chokwadi ndechekuti mabhuku aakatanga kushambadzira aive asisiri mazhinji kune mwana kana vateereri vechidiki, asi munhu mukuru. Saizvozvo, muna 2001 naLa Bella Otero, akawana firimu inoenderana.
Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti Carmen Posadas anga achizvipira zvakanyanya kumhando yemanyaya evakuru, anogara aine nzvimbo yekutora nyaya dzevana. Yekupedzisira pairi ibhuku rangu rekutanga paMachado, kubva muna 2009. Kune chikamu chayo, chemanovel, yekupedzisira yakaburitswa inonzi The Legend of the Pilgrim, kubva 2020.
Kana zviri zvekunyora mibairo, iye ane muunganidzwa mudiki kuchikwereti chake. Tinogona kusimbisa iyo Mubairo wePlaneta muna 1998, Mubayiro Wetsika weVanhu veMadrid muna 2008; kana iyo Brazier Prize, iyo 2014 Goncourt yeFrance Gastronomic Novel.
Carmen Posadas mabhuku
Kutaura newe zvichitevera nezve rimwe nerimwe remabhuku aCarmen Posadas angangove asingagumi. Kunyangwe asina kunyora zvakanyanya sevamwe vanyori, iye ane muunganidzwa wakanaka wemabasa ake. Kunyanya, uye zvichibva paruzivo kubva kuWikipedia, Akanyora makumi maviri nemana nyaya dzevana, 24 zvinyorwa, bhuku rehurukuro nemunyori Lucrecia King-Hedinger, uye gumi nemana nhoroondo.
Pakati pavo vese, tinosimbisa zvinotevera:
Ishe North Mhepo
Un bhuku revana kubva pamakore matatu mune iyo nyaya inotaurwa nezve dzimwe mhuka idzo, dzichiona kuti mwedzi waKurume wasvika, vanotya kuoneka kweanotyisa VaNorth Wind, nekuti haamire kufuridza.
Vana vaviri, Arturo naMaría, vanozoedza kugutsa murume uyu kuti arege kufuridza kuitira kuti chitubu chisvike.
Mutengesi wezviroto nedzimwe nyaya
Rakadhindwa neAlfaguara imba yekutsikisa (uye isiri nyore kuwana izvozvi), une Mutengesi weDoto uye Dzimwe Nhau, naCarmen Posadas. Iri bhuku, iro rakanangana nevana Makore 8-9, inotaurira nyaya yaAhmet, mutengesi wechidiki anosangana nemushambadzi. Izvi zvinokupa iwe mamwe mashiripiti anodonhedza ayo anoita kuti iwe uende kune inonakidza nyika uko iwe uchave wakapfuma uye une simba. Asi zviroto izvozvo zvakare zvakavanza njodzi inotyisa.
Madiki infamies anotiisa isu muzhizha imba yemuunganidzi wehunyanzvi. Anofunga kusangana pamwe neboka revanhu uye maawa anoenda nenzira inofadza. Kusvikira zvinhu zvikaenda zvisirizvo uye hukama hwakasviba, zvirevo zvine zvirevo zvakapetwa kaviri uye "zvakashata" zvirevo zvinotanga kuoneka.
Nhasi caviar, mangwana sardines
Tinosimbisa bhuku iri nemunyori nekuti kwaive kubatana nemunin'ina wake, Gervasio Posadas. Iri bhuku richaverenga iyo nguva dzemhuri yePosadas kuburikidza nenzvimbo dzakasiyana dzavaigara nekuda kwebasa rababa vavo. Mariri, vanyori vakaedza kumiririra zvakaita hupenyu hwediplomate, nemabiko, masikati, kudya kwemanheru, nezvimwe. pamwe nekurarama "kupfuura zvavaikwanisa" uye kuyedza kunyepedzera chifananidzo icho chaive chisiri chaicho chavaive nacho.
Iri bhuku nderekupedzisira rakaburitswa kusvika nhasi naCarmen Posadas. Uye maari, kure nezvaunogona kufunga nezvazvo kubva kumusoro, Inobata nenyaya yemajombo anonzi La Peregrina. Iparera, rinozivikanwa kupfuura dzimwe nguva dzese. Pakutanga, yakawanikwa muCaribbean Sea uye yakapihwa kuna Felipe II. Izvi zvaiisiya senhaka kune vamambokadzi vakasiyana kusvika, neHondo yeRusununguko, zvasvika muFrance. Ikoko, Richard Burton pachake akazvipa kuna Elizabeth Taylor.
Iri bhuku, rakanyorwa nenjere uye nekamwe kuseka, rinotsvaga kushanda se nongedzo yekufungidzira rudo zvipoko, sezvazvinotaura pabutiro rebhuku. Uye ndezvekuti icho icho chinoedza kudzidzisa kuona mimvuri yerudo rwekare izvo zvinogona kuve zvikonzereso zvekuti iwe unofananidza rudo rwako rutsva neyakare, kana kuti iwe unofunga kuti mumwe ari nani kupfuura mumwe.
Ehe, hazvitsvake kuvanyengerera kuti vave chikamu chehupenyu hwako, asi kuvapedza uye kuvhura mapeji kamwechete uye zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Carmen Posadas chigadziri chemufananidzo
Carmen pelaez akadaro
Mhoroi, ndiri kuverenga bhuku raSira, uye ndakabatikana. Mazuva mashoma apfuura ndakaona akateedzana "Pakati pemapapiro" uye ndinofunga ndinorangarira kuti Ramiro Arribas akashaya, uye mubhuku "Sida" akaonekazve. Ndakavhiringika.
Pindura kuna Carmen Pelaez
Araceli Cobos Mambokadzi akadaro
Muna 1999, Rafael Ruiz del Cueto, murume wake wekutanga uye baba vevanasikana vake vaviri, haana kufa, asi murume wake wechipiri Mariano Rubio. Shuwiro yakanakisa.
Pindura Araceli Cobos Reina
Ini handinzwisise chirevo chako. Kukanganwira
Noelia Yero. Kubvunzana nemunyori webhuku rerudo
Zuva rebhuku: mabhuku akakosha ekuverenga